Oduu Owiituu Waranni Mootumma Ilmaan Oromoo sabboonumma qaban irratti reebicha hamaa gaggeessaa jira - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Owiituu Waranni Mootumma Ilmaan Oromoo sabboonumma qaban irratti reebicha hamaa gaggeessaa jira
Amaanu’eel jedhama, barataa siiviil Enjiineriingii waggaa 5ffaa yunivarsiitii wallaggaa dha.
Mucaan Kun waggoottan qabsoo hadhaa’oo obsa nana fixachiisoo darban Sana keessatti sodaa tokko malee Adda durummaan rasaasa agaaziin wallansoo nama Wal qabaa turedha. Hiriyyoonni isaa hedduun sadarkaa Haarsaa wareega lubbuutti kaffalanis Waaqayyoo jiraachisee har’aan Isa geenyaan mootummaan Oromoo jedhamu dafqa oladeemaa kanaan aangootti Kan dhufe garuu har’a qaroo Oromoo kana reebicha garmaleen adabaa jira. Magaalaa Naqamte bakka Mana jireenyaa isaatii Erga humna waraana mootummaan butamee achi buuteen isaa dhabamee torban lamaa ol ta”eera.
Dhaloota kana humnaan mo’uun hin dandaa’amuutii hiikaa.
Reyes Mohammed Dooyyoo
Jaal Seeyfuu Muummee gara fuula rabbii deemuu dhagayee hedduun gadde.
Jaal Seeyfuun nama hanga gaafa ruhiin keessa jirtutti qabsoo kana jiraachisuufi bakkaan gahuuf jiraateedha. Gaafa dura qabsoon dhalatturraa kaaseeti hirmaachaa ture. Akka daldalaa beekkamaa Baha Oromiyaatti, baroota 70mootafi 80moota keessa qabsoo diinaggeen dhinnisuudhaan beekamus shoorri isaa sanii ol akka ture himu qindeessitoonni qabsoo yeroo sanii. Qabsaa’otaafi hogganoota jiddugala irraa gara dirree waraanaa daddabarsuu keessatti shoora olaanaa taphachaa ture. Daldaltoota walittti qindeessuun leeccalloofi odeeffanoon mooraa qabsoo utubaa ture.
Sababuma kanaan bara Wayyaanee irratti xiyyeeffatame. Sabbonummaa dadhabsiisuufi tin’isa mooraa qabsoo gogosuuf sirni gabrooftaaa daldaltoota irratti xiyyeeffatee ture. Haaluma kanaan daldaltoota quuqama sabaa qaban adda baasuun irratti xiyyeefatame. Akkuma ammaa kana daldaltoonni takkaa gara mootummaa goranii kittillaayyoo akka tahan, didan ammoo akka rukutaman murtaa’e. Warri doorsisaafi sossobbii dide sababa ABO jedhu itti maxxansanii mana hidhaatti daraban. isaan boodaa qabeenya isaanii saaman. Garii ni ajjeesan. Daldaltoota roorroo diinaa kanaan maatiifi qabeenyi jalaa faca’ee baqa mudate keessaa tokko Seeyfuu Muummee ture. Garuu erga lubbuun baafatee baqa mudates jiilee qabsoo irraa hin qoorrifanne. Mooraa baqaaa Keeniyaafi Ameerikaattis ummata gurmeessuu, tin’isa qabsoo walitti sassabuu itti fufe. Yeroon biyya Ameerikaa turetti walgahiin dhimma sabaa inni irraa dhabame, qophiin gargaarsa walitti qabuu inni kiishaa isaa itti hin duwwisin hin yaadadhu.
Jaal Seeyfuu rabbi raahamata haa godhuuf, jannataan haa qananiisu. Maatiifi firoottan akkasumas jaallan qabsoo isaaf jajjabina hawwa.